Tigidhada Tareenka SBB ee Jaban iyo Wadooyinka Safarka Qiimayaasha | Save A tareenka
Tigidhada Tareenka SBB ee Jaban iyo Wadooyinka Safarka Qiimayaasha
Guriga > Tigidhada Tareenka SBB ee Jaban iyo Wadooyinka Safarka Qiimayaasha
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tikidhada tareenka ee SBB oo jaban iyo Qiimaha safarka ee SBB iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. SBB by Tilmaamaha Tareenka
2. Ku saabsan SBB 3. Aragti Sare Si Aad U Hesho Tigidhka Tareenka ee SBB oo Jaban
4. Immisa ayey ku kacayaan tikidhada SBB 5. Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenada SBB, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Maalin Gudbinta, iyo Supersaver ee SBB 7. Ma jiraa rukumo SBB ah?
8. Intee in le'eg ka hor bixitaanka SBB si ay u timaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka SBB
10. Xarumaha tareenka ee ay bixiso SBB 11. SBB FAQ
SBB by Tilmaamaha Tareenka
The Tareennada Federaalka ee Switzerland, SBB, waa shirkadda tareenka qaranka ee ka shaqeysa Switzerland.
Tareenada SBB waxay kujiraan meesha ugu sareysa ee nidaamka tareenada qaran ee Yurub, iyo gudaha 2017 ayaa kaalinta koowaad ka galay tayadooda adeeg, darajada amniga, iyo tusmada waxqabadka.
25 milyan oo rakaab ah ayaa ku safraya SBB maalin kasta.
Adeegga tareenka ee SBB waa mid ka mid ah adeegyada ugu waqtiga wanaagsan ee tareenka adduunka laga helo, leh wax ka yar 3 celceliska daqiiqadaha.
Tunnelka tareenka ee SBB ugu dheer, tunnelka Gotthard, ee Alps Swiss, tallaabooyin 57.1 kiiloomitir oo wuxuu dhigaa rikoor adduunka ah.
SBB ayaa leh 3 luqadaha rasmiga ah: Jarmal, Faransiis, iyo Talyaani. Sidaa darteed, Saldhigyada tareenka ee SBB ayaa loogu magac daray laguna calaamadeeyay iyadoo la raacayo deegaanka: Magacyada iyo astaamaha saldhigyada ee magaalooyinka laba-luqadlaha ah waxay ku qoran yihiin labada luqadood ee maxalliga ah, oo maxaad magaca u arki kartaa mararka qaarkood sidan oo kale SBB CFF FFS.
Ku saabsan SBB
SBB waa adeeg tareen Switzerland oo ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka.
Shirkadda tareenka ee Swiss SBB waxay ka shaqeysaa dhammaan Switzerland, la 798 tareenada, iyo 721 tikidhada tareenka ee iibka. Shirkadda tareenka ee SBB waa mid ay dowladdu leedahay tan iyo 1-dii Janaayo, 1999, oo macnaheedu yahay gobolka federaalku haysto 100% ee saamiyada.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso tababbarto tigidhada SBB
Aragti Sare Si Aad U Hesho Tigidhka Tareenka ee SBB oo Jaban
Tirada 1: Hore u sii qaado tigidhadaada SBB inta aad kari karto
Tigidhada tareenka ee SBB waxaa laga heli karaa internetka illaa 60 maalmood kahor taariikhda safarkaaga. Markaad dalbato tigidhada tareenka waqtiga ka hor, waxaad helaysaa tigidhada ugu jaban iyo tikidhada tareenka ee SBB ee ugu jaban waa kuwo aad u kooban. Intaas waxaa sii dheer, Qiimaha tigidhada tareenka ee SBB ayaa cirka isku sii shareeraya maadaama maalinta safarkaagu ay soo dhowaanayso, sidaas si lacag ku keydi iibsiga tigidhada tareenka SBB, tigidhada tareenkaaga horay u sii qaado. Si aad lacag ugu keydiso tikidhada tareenka ee SBB, tikidhada hore u iibso.
Tirada 2: Safarka SBB inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa
Tigidhada tareenka ee SBB waa ka jaban xilliyada-ka-baxsan, bilowga toddobaadka, iyo maalintii. Waad iska hubsan kartaa inaad heleyso tigidhada tareenka ka jaban toddobaad gudihiis. Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, Tigidhada tareenka ee SBB waa kuwa ugu dhaqaalaha badan. Mugga of safarrada ganacsiga shaqada subaxdii iyo galabtii, tikidhada tareenka ayaa ka qaalisan. Sayidka, aad ayey uga jaban tahay in la safro wakhti kasta inta u dhexeysa duhurkii iyo fiidkii. Usbuuc-dhamaadka waa waqti kale oo ugu sarreeya oo loogu talagalay tareennada, gaar ahaan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Qiimaha tigidhada tareenka ee SBB sidoo kale way kordhayaan ciidaha dadweynaha iyo ciidaha iskuulka.
Tirada 3: Dalbo tikidhadaada SBB markaad hubto jadwalka safarkaaga
Tareenada SBB ayaa baahi weyn loo qabaa, oo leh kaliya 2 shirkadaha kale ee tareenka sida tartan, iyagu weli waa xulashada ugu sareysa ee tareenada Switzerland. Waxay awoodaan inay dejiyaan xaddidaadda tigidhada tareenka sida tii oo kale oo mamnuucaya is-weydaarsiga tigidhada ama soo-celinta ilaa ay tahay nooca tikidhada Ganacsiga.. In kasta oo ay weli jiraan degello internet oo aad tikidhadaada gacan labaad dadka uga iibin karto, SBB ma ogolaaneyso iibinta tigidhka gacanta labaad. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga keliya markaad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad hal tikit laba jeer dhigto maxaa yeelay wax baa soo baxay oo ma isticmaali kartid tigidhka asalka ahaa..
Tirada 4: Ka iibso tigidhadaada SBB kaydka Tareenka
Badbaadinta Tareenka ayaa leh kan ugu weyn, ugu fiican, iyo heshiisyada ugu jaban tikidhada tareenka ee Yurub. Xiriirka aan la leenahay wadayaasha badan ee tareenka, ilaha tikidhada tareenka, iyo aqoonteenna ku saabsan algorithms-ka tikniyoolajiyadda waxay na siisaa marin u hel heshiisyada tikidhada tareenka ee ugu jaban. Kaliya ma bixinno heshiisyada tikidhada tikidhada jaban ee SBB oo keliya; waxaan si isku mid ah u siineynaa beddelka kale ee SBB.
Lyon ilaa Basel Qiimaha Tareenka
Paris ilaa Qiimaha Tareenka Basel
Qiimaha Lucerne ilaa Basel
Immisa ayey ku kacayaan tikidhada SBB?
Tigidhada SBB waxay kabilaabanayaan € 12.50 ilaa iyo high 125 safarka tareenka hal mar. The qiimaha tigidhka tareenka ee SBB waxay kuxirantahay nooca tigidhka, caga, iyo markaad doorato inaad safarto:
Jaangooyo 50 12.50 – € 35 28 – 55
Fasalka Koowaad € 50 – € 95 € 50 – € 125
Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenada SBB, oo aan lagu raacin diyaaradda
1) Waxaad Timaadaa at the Xarunta Magaalada. Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka tareenada SBB marka la barbar dhigo diyaaradaha. Tareenada SBB iyo dhamaan safarka tareenka kale meel kasta oo magaalada ah illaa bartamaha magaalada ku xigta, macno malahan hadii ay tahay a keydka dabiiciga ama tuulo. Waxay ku badbaadineysaa waqti iyo qiimaha kabista garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada. Iyadoo joogsiga tareenka, way fududaan tahay inaad tagtid meel kasta oo magaalada aad u socoto. Macno malahan halkaad ka timid, Geneva, Basel, Zermatt, ama Zurich, joogsiga bartamaha magaalada waa faa iidada ugu weyn ee tareenada SBB!
2) Ku safridda diyaaradaha waxay u baahan tahay inaad ku sugnaato garoonka diyaaradaha ugu yaraan dhowr saacadood kahor waqtiga duulimaadkaaga. Waa inaad marto baaritaanka amniga kahor intaan laguu oggolaan inaad fuusho diyaaradda. Tareenada SBB, kaliya waa inaad joogtaa saldhiga wax ka yar saacad ka hor marmarna xitaa kayar. Markaad tixgeliso waqtiga ay kugu qaadanayso inaad ka raacdo garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada, waxaad ogaan doontaa in tareenada SBB ay kafiican yihiin wadarta guud waqtiga safarka.
3) Dusha sare, qiimaha tikidhada tareenka ee SBB waxay umuuqdaan kuwa ka qaalisan tigidhada diyaaradaha ee miisaaniyada. Si kastaba ha ahaatee, markaad isbarbar dhigto dhamaan dacwadaha ku lugta leh, Tigidhada tareenka ee SBB waxay leeyihiin heshiis qiimo fiican. Iyada oo ay kujirto kharashyo kale sida ajuurada boorsooyinka ee aadan aheeyn inaad ku bixiso tareenka, safarka SBB ayaa ugu fiican.
4) Tareenadu deegaan bay u fiican yihiin. Isbarbar dhig ku dhexmara tareennada iyo diyaaradaha, tareenadu had iyo jeer way ka soo bixi jireen kor. Diyaaradaha ayaa si ba'an dhulka ugu wasakheeya heerarka sare ee kaarboon iyo co2 ay iska bixiyaan. Tareenada marka la barbardhigo isticmaalka raad aad u yar oo Kaarboon ah ka badan diyaaradaha.
Chur ilaa Qiimaha Tareenka ee Sois
Zurich ilaa Qiimaha Tareenka Chur
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Geneva ilaa Chur
Basel ilaa Qiimaha Tareenka ee Zurich
Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Maalin Gudbinta, Kaydinta Maalinta Gudbinta, iyo Supersaver ee SBB?
SBB waxay leedahay noocyo tigidhada loogu talagalay miisaaniyadaha kala duwan iyo noocyada socdaalka: ha ahaato ganacsi ama madadaalo. Waad iska hubsan kartaa in mid ka mid ah tigidhadan ay kugu habboonaan doonaan.
Tigidhada SBB ee caadiga ah:
The Tigidhada SBB Standard waa midka ugu jilicsan dhammaan tikidhada SBB. Tigidhada tareenka waxaa loogu talagalay dhibic-ilaa-dhibic 1 jidka ama wareega. In si kale loo dhigo, tigidhka caadiga ah ee SBB waa kaarka socdaalka ee caadiga ah. Tan ugu muhiimsan, tigidhkan tareenka wuxuu shaqeynayaa maalinta oo dhan oo aad dooratay waqtiga iibsiga, iyo ilaa 5 waxaan ahay maalinta xigta. Intaa waxaa dheer, waxaad ka iibsan kartaa tigidh dhibic-ilaa-dhibic SBB ah fasallada 1aad iyo 2aad. Faa'iidada kale ee weyn ee tigidhada dhibic-ka-dhibic waa carruurta illaa da'da 6 socdaal bilaash ah. In si kale loo dhigo, waad u safri kartaa meel kasta oo aad rabto iyo fasal kasta, safarkaaga A ilaa B.
SBB Day Pass iyo Saver Day Pass Tigidhada:
Kaadhka safarka ee Kaydinta Maalinta Kaydinta, waxaad bixin kartaa uguyaraan € 27 safarkiiba. Tigidhka Maalinta Pass ayaa la heli karaa oo keliya haddii aad hore u sii hesho, lagama heli karo xarunta tareenka, sida ugu dhakhsaha badan 60 maalmood ka hor taariikhda bixitaankaaga. Waxa kale oo aad dalban kartaa tikidhada noocan ah maalin ka hor safarka. Waxaa intaa dheer, tigidhka Saver Day Pass wuxuu ansax u yahay doomaha, basaska, ama safarada taraamka.
SBB Supersaver Tigidhada:
Fasalka tikidhadaani uma jajabna sida tikidhada tareenka ee loo yaqaan 'Standard SBB', laakiin ka jaban tikidhada kale ee tareenka. Tigidhada Supersaver SBB waxay bixisaa illaa 70% qiimo dhimista tikidhada caadiga ah. Si ka duwan tikitka tareenka caadiga ah, tikidhada noocan ah waxay bixisaa qiimaha ugu hooseeya ee safarka gaarka ah ee A ilaa B. Micnaha, kuma boodi kartid ama kuma degi kartid saldhig kasta, marka laga reebo saldhigyada aad horay u sii ballansatay.
Kaarka safarka ee Day Pass wuxuu ku siinayaa dabacsanaan taariikhda safarka. In si kale loo dhigo, waad safri kartaa markasta oo aad rabto, maalinta taariikhda bixitaanka.
Lagu kala qaado Qiimaha Tareenka ee Zurich
Qiimaha Tareenka ee Lucerne ilaa Zurich
Bern ilaa Qiimaha Tareenka ee Zurich
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Geneva ilaa Zurich
Ma jiraa rukumo SBB ah??
Kaliya muwaadiniinta maxalliga ah ayaa iibsan kara kaarka socdaalka GA, taas oo asal ahaan hal kaar u ah wax walba. Kaarka socdaalka ee GA ayaa shaqeynaya dhammaan gaadiidka dadweynaha gudaha Switzerland.
Waxaad ka iibsan kartaa halkan:
– Tirada tigidhada SBB.
– Adeegga macaamiisha maxaliga ah ee SBB 848 44 66 88
– Laga soo bilaabo shaqaalaha saaran tareenada iyo basaska SBB.
Qoyska GA Travelcard
Caruurta iyo dhalinyarada waaweyn ilaa da'da 16 waalidkoodna wuu ku raaxeysan karaa qiimo dhimista kaarka safarka ee Familia GA. Kaadhkan waa la heli karaa haddii ugu yaraan hal qof oo qoyska ka tirsan uu haysto kaarka socdaalka ee SBB.
Dhamaan dadka haysta Familia GA waxay ku raaxaystaan ​​sicirka aadka loo dhimay ee kaarka kale ee safarka GA ah. Intaa waxaa dheer, qoys ayaa go aansan kara hadii ay rabaan inay iibsadaan Familia GA fasalka 1aad ama 2aad.
Marka aad tahay 25 waxay ku saabsan tahay baashaal, oo hadda leh kaar toddobo ah, waad ka safri kartaa si aan xad lahayn 7 galabnimo. Micnaha, Kaarka socdaalku wuxuu ansax yahay inta udhaxeysa 7 galabnimo 5 waxaan ahay. Sidaas, sidee u shaqeysaa? Toddobaatanaad waxaa lagu dhejiyaa kaarkaaga socdaalka ee Swiss Pass oo waad u isticmaali kartaa joogsi kasta.
Intee in le'eg ka hor bixitaanka SBB si ay u timaado?
Si aad u hesho SBB-kaaga oo aad waqtiga saxda ugu dhacdo, wadada tareenka waxay kugula talineysaa inaad ugu yaraan timaadid 1 saac ka hor inta uusan tareenkaaga SBB dhoofin. Waxaan joognaa tareenka Save A tan iyo markii aan waxbadan kusoo safarnay tareenada SBB, kugula talin inaad timaado xitaa 30 daqiiqado kahor, markaa uma baahnid inaad ku deg degto xarumaha waaweyn ee tareenka si aad tareenka u qabato. Intaa waxaa dheer, saacad waa ku filan oo ku filan inaad ku raaxeysato dukaamada iyo goobaha cuntada lagana helo waxyaalaha aad ugu baahan tahay safarka tareenka inuu noqdo sidii ugu macquulsan oo macquul ah.
Waa maxay jadwalka tareenka SBB?
Waxaad ka heli kartaa waqtiga-dhabta ah boggayaga oo ku yaal Save A train. Kaliya ku qor meesha aad hadda ku sugan tahay iyo halkaad rabto, waxaanan ku tusi lahayn macluumaadka cusub ee jadwalka tareenka.
Xarumaha tareenka ee ay bixiso SBB?
Way jiraan 10 saldhigyada ay ka shaqeeyaan adeegyada tareenka ee SBB.
Saldhiga Zurich ee SBB waa Saldhiga Dhexe ee Zurich (Magaca deegaanka waa Zurich HB). Tani waa rugta tareenka ee SBB ugu weyn magaalada Zurich waxayna ku taal bartamaha Zurich, dhow Webiga Limmat.
Bern waa caasimada Switzerland iyo xarunta tareenka ugu dhow ee Jaamacadda Bern oo ku taal Xaafadda Langgasse.
Jeneva maalmahan Tareenada SBB ka dhoofo oo ka yimaado Xarunta Dhexe ee Geneva, bartamaha magaalada.
Basel Saldhigga SBB waa saldhigga ugu weyn Yurub ee xadka. Taasi waa in la yiraahdo Laga soo bilaabo Switzerland, waad u safri kartaa Jarmalka, Faransiiska, Awstariya, iyo Nederland oo leh adeegga tareenka ee SBB. Tan ugu muhiimsan, waxaa jira 50 dukaamada iyo maqaayadaha ku yaal saldhigga Basel, halkaas oo aad uga adeegan karto wax kasta oo aad ugu baahan tahay safarka. Tusaale ahaan, waad iibsan kartaa cunto fudud iyo xusuus-daqiiqadii ugu dambeysay. Laga soo bilaabo saldhigga Basel SBB, iyo saldhigyada waaweyn ee aad u safri karto waa Frankfurt, Paris, iyo Salzburg.
Baaskiil Ma Loo Oggol Yahay Gudiga Tareenada SBB?
Baaskiiladaha waa loo oggol yahay tareennada SBB. Waxaad tikit uga iibsan kartaa saldhigga, oo u diiwaangeli baaskiil sida shandado ama u qaado tareenka sida shandadaha gacanta.
Carruurta Ha Ku Safraan Bilaash Tareennada SBB?
Haa xaaladaha qaarkood, weheliyaan carruurta ka yar lix sano socdaal bilaash ah. Intaa waxaa dheer, carruurta da'doodu tahay lix jir, iyo ilaa ay 16 safarka dhalashada qiimaha badh.
Ma xayawaannada loo oggol yahay Tareennada SBB??
Haa, eeyaha waa la ogol yahay ilaa iyo inta ay ku safrayaan sagxada rakaabka ama boorsooyinka.
Maxay yihiin habraaca lagu raaco SBB?
Waa inaad timaad saldhigga ugu yaraan 1 saac ka hor waqtiga bixitaanka tareenkaaga, oo tus aqoonsi kormeeraha tikidhada si loo xaqiijiyo.
Inta badan la Weydiiyo SBB FAQ – Miyaan sii haysan karaa kursi horay SBB ah?
Waxaad karaa kaydso tareenka a waan ogahayat ka hor ilaa 5 Rakaabka qiimaha € 5 halkii kursi. Si kastaba ha ahaatee, Boos celinta waa inay ku hoos jirtaa magaca qofka safraya.
Ma jiraa adeegga Wi-Fi ee gudaha SBB-ka??
Haa. Waad ku raaxeysan kartaa Bilaash Wi-Fi adeega dhamaan tareenada SBB iyo dhamaan casharada safarka ilaa 60 daqiiqo.
Hadaad akhrido ilaa hada, waad ogtahay dhamaan waxaad ubaahantahay inaad ka ogaato tareenadaada SBB waxaadna diyaar u tahay inaad tikidka tareenka SBB ku iibsato Save A tareenka.
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.